Semalt: यी Online अनलाइन घोटालाहरूबाट सुरक्षित रहनुहोस्
साइबर अपराधीहरूले हालका वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा अनलाइन व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पारेका छन्। इन्टर्नेट वेबसाइट र सेवाहरूले हामीलाई बिलहरू तिर्न, हाम्रो मनपर्ने चीजहरू किन्न, होटेल रिजर्भ गर्न र बिभिन्न कार्यहरू गर्न सजिलो बनाउँदछ। एकै समयमा, तपाई ह्याकरहरू द्वारा पासोमा पर्नुहुनेछ, र के हुँदैछ भन्ने बारे तपाईलाई कुनै विचार आउँदैन। आक्रमण गर्ने उपकरणहरू र विधिहरू पारंपरिक आक्रमण विक्रेताहरूबाट दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयरमा रिमोट अनुप्रयोगहरूमा भिन्न हुन्छन्। केहि मानिसहरु संसारको अज्ञात क्षेत्र बाट तैनात बौद्धिक फिशिंग घोटाला द्वारा जालमा पर्छन्।
ओलिभर किंग, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, online अनलाइन घोटालाहरू परिभाषित गर्दछ जुन आज खतरनाक भन्दा बढी छन्।
१. अन्तर्राष्ट्रिय लटरी
घोटाला गर्ने र ह्याकरहरू प्राय: संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा आधारित हुन्छन्। तिनीहरू सीधा ईमेल वा फोनहरू उपभोक्ताहरूलाई हाइ-प्रोफाइल लटरीहरू खरीद गर्न लोभ्याउन प्रयोग गर्दछन्। उनीहरूले यो लटरी मार्फत तपाईले असाधारण केहि चीज जित्न सक्नुहुन्छ भनेर बहाना गर्दछन्। ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू फस्छन् र यी योजनाहरूमा हजारौं डलर खर्च गर्छन्। संघीय व्यापार आयोग (FTC) भन्छ कि प्राय: प्रचार अभियानहरु टेलिफोनिक हुन सक्छ।
२ नक्कली भाइरस (त्यो वास्तविक हुन्छ)
यो सत्य हो कि प्राविधिक उत्पादनहरू र ग्याजेटहरूमा अक्सर भाइरस र मालवेयर विकास हुन्छन्। यदि तपाइँ देख्नुहुन्छ कि तपाइँको कम्प्युटर प्रणाली ठीक चलेको छैन वा लक भएको छ भने, यसमा भाइरस हुने सम्भावनाहरू छन्। तपाईंले सकेसम्म चाँडो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर स्थापना गर्नु पर्छ। यद्यपि, केहि 'नक्कली भाइरसहरू' लाई तपाइँको कम्प्युटर प्रणालीहरूमा हमला गर्न सक्छ। तिनीहरूले तपाईंको उपकरणको गति धीमा गर्दछन्, र तपाईं एक विशिष्ट सफ्टवेयर स्थापना गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। नतिजाको रूपमा, नक्कली भाइरसहरू वास्तविक हुन्छन् र तपाईंको संवेदनशील जानकारी चोरेको छ। यस समस्याको एक मात्र समाधान यो हो कि तपाईं सफ्टवेयर स्थापना गर्नुहुन्न जुन तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न।
राम्रो इरादा गलत भएको छ
कहिलेकाँही स्क्यामरहरू परोपकारका प्रतिनिधिहरू जस्तो लाग्छ। तिनीहरू तपाइँलाई एक प्रकोप, आतंकवादी हमला वा महामारी पीडितलाई मद्दत गर्न चाहन्छन्। प्रायः, ह्याकरहरूले मानिसहरूलाई पासोमा पार्छन् जो क्षेत्रीय द्वन्द्वको समाधान गर्न रुचि देखाउँछन्। यसैले, तपाईंको राम्रो अभिप्रायहरू गलत बन्छ किनकि तपाईं एक महत्वपूर्ण रकम गुमाउनु हुन्छ र कुनै परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न।
Security. सुरक्षा उल्लंघन
यदि कसैले तपाईंलाई ईमेल गरेर भन्छ कि तपाईंले कम्पनीको नियम र कानूनको उल्लंघन गर्नुभयो भने, तपाईं यसको चिन्ता लिनुहुन्न। ठूलो संख्यामा हलिउड चलचित्रहरूले चित्रण गर्दछ कि मान्छेहरू कसरी पुलिस अफिसर वा सुरक्षा गार्ड भएको ढोंग गर्दछन् ह्याकरहरू द्वारा। कुनै अधिकारीले व्यक्तिगत ईमेलहरू पठाउँदैन। तिनीहरूले यसको सट्टामा व्यापक अनुसन्धान गर्छन् र तपाईं समक्ष पुग्न सक्छन्। तपाईंले सुरक्षा अधिकारी भएको नाटक गर्ने कसैलाई पैसा पठाउन हुँदैन। चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन यदि उसले भन्छ कि तपाईं सुरक्षा मुद्दाहरूको शिकार हुनुभयो।
New. नयाँ काम
इन्टरनेट मार्केटिंग फ्रडको एक भिन्नताले खाँचोमा परेका र गरिब मानिसहरूलाई रोजगार र टिकट प्रदान गर्दछ। बेरोजगार हुनु स्नातकको लागि सबैभन्दा ठूलो श्राप हो, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आफ्नो पैसा कसैलाई पठाउनु भयो जसलाई थाँहा छैन। केहि स्क्यामरहरूले तपाइँलाई उनीहरूको वेबसाइटहरूमा दर्ता गराउन र तपाइँको CVs बुझाउन अनुरोध गर्दछ। तपाइँको सीभी पठाउन ठीक छ, तर तपाइँले तिनीहरूलाई केहि भुक्तान गर्नु हुँदैन किनभने कुनै प्रतिष्ठित कम्पनीले आफ्ना कामदारहरूलाई अगाडि तिर्न भन्दैन। र यदि तपाईंलाई काममा लिनु अघि केहि भुक्तानी गर्न भनियो भने, त्यहाँ सम्भावनाहरू छन् कि एक ह्याकरले तपाईंको पैसा चोर्न कोशिश गरिरहेको छ।
Online. अनलाइन प्रेमिका
धेरै संख्यामा व्यक्तिहरू दैनिक आधारमा डेटि websites वेबसाइटहरूमा दर्ता गर्छन्। तिनीहरू या त रोमान्टिक मिति वा विवाहको लागि राम्रो साझेदार बनाउन चाहन्छन्। कुनै पनि तरिकामा, अनलाइन डेटि sites साइटहरूसँग जाने राम्रो छैन। घोटाला गर्नेहरू र ह्याकरहरूले प्राय: मानिसहरूलाई यी वेबसाइटहरू मार्फत पासोमा पार्दछन्। तिनीहरू पहिले तपाइँको साथी बन्छन्, एक प्यारी र प्यारी केटी भएको बहाना गरी। त्यसोभए तिनीहरूको लक्ष्य भनेको तपाईसँग सम्बन्ध बनाउनु हो र केहि पैसा सोध्नु हो। यदि कसैले भन्छ कि ऊ समस्यामा छ, तपाईले उसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ तर उनीहरूको बैंक खातामा पैसा पठाउँदैन।